Iniesta Oo Ka Warbixiyay Xaaladiisa Caafimaad & Hadii Uu Xidigan Dheeli Karo Kulanka CL Ee Chelsea %
Iniesta Oo Ka Warbixiyay Xaaladiisa Caafimaad & Hadii Uu Xidigan Dheeli Karo Kulanka CL Ee Chelsea
Kabtanka kooxda kubada cagta Barcelona, ee Andres Iniesta, ayaa wuxuu sheegay in xaaladiisa caafimaad ay maalinba maalinta kasii dambeysa ay kasii fiicnaaneyso, islamarkaana uu wali ku jiro xaalad soo kabasho.
Laacibkaan ayaa wuxuu dhaawac uu ku seegay ciyaartii ay la dheeleen dhigooda Malaga, markaasoo ay Barcelona kusoo badisay 2-0, waxaana goolasha kala dhaliyay ciyaartoyda kala ah: Suarez iyo Coutinho,.
Guushaan ayaa waxay ka saaciday Bluagrana, inay hada hogaanka La Liga ay ku hayso 72 dhibcood, waxayna Atletico Madrid ay ku jirtaa kaalinta labaad waxayna leedahay 64 Buundo, halka Madrid ay saddexaad Jiifto.
“Maalin walba, waxaan ahay mid soo dhawaanaya,” ayuu xidigaan khadka dhexe uga dheela Barcelona, islamarkaana udhashay wadanka Spain, ee Andres Iniesta, uu kusoo qoray bartiisa Instagram-ka.
Shabakada MARCA, ee kasoo baxda dalka Spain, ayaa waxay ku macneysa hadalka kasoo yeeray Iniesta mid diyaar u ah inuu dheelo kulanka ay soo dhaweyn doonaan habeenka Arbacadda, kaasoo Chelsea, ay la balansan yihiin.
Ciyaartaan ayaa ka tirsan lugta labaad ee wareega 16-ka Champions League, iyadoona xusid mudan tahay in lugtii koowaad ay kusoo kala baxeen labadda dhinac 1-1, ciyaartaana waa mid aad loo dhowrayo.
Garsoore Maxamed Soomaali iska indha tiray qaladkii Catoosh waa in Xiriirku ganaaxaa oo uusan cayaarin kulanka Dakedda